Foodistaha Kooxda Liverpool Mario Balotelli Oo Doonaya In Uu Ku Biiro Kooxda Manchester United - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciyaariyahanka Fashilka kooxda Liverpool Mario Balotelli ayaa doonaya in uu ku biiro kooxda Manchester United sida ay werinayso majalada caanka ah Gazzetta dello Sport ee kasoo baxda dalka Taliyaaniga.
Macalinka kooxda Reds Jurgen Klopp ayaa u sheegay Balotelli in uu fasax ka yahay naadigiisa islamarkaana uu ku biiri karo koox waliba oo doonaysa xiddigan madaama uu ku fashilmay garoonka Anfield Road ee ay ku ciyaarto kooxda Liverpool.
Wakiilka xiddigan Mino Raiola ayaa sheegay in Mario uu doonayo in uu dib ula middoowo macalinkiisii hore ee Jose Mourinho kaas oo hadda mamula garoonka Old Trafford, islamarkaana waxaa uu doonayaa in uu helo koox cusub oo uu ku biiro xiddigan heerka caalami ee u dhashay dalka Taliyaaniga.
Shabakada Goal ee ka faalota arimaha ciyaaraha ayaa werisay horaantii bishan in Mario iyo Mourinho ay ku kulmeen dalka England xili 26 sano jirkan uu baadi goobayay koox cusub oo uu ku biiro, kadib markii uu iska waayay liiska ciyaartooyda Reds ee xilli ciyaareedkan.
Sheeko galmada odayaasha da’da wayn